Shirkii IGAAD oo soo dhamaday iyo qodobo ka soo baxay (Daawo soo dhoweynta Madaxweyne Shariif) | Calanka Somalia
← Maxaa ka jira in Midowga Afrika uu Doonayo in Meesha uu ka Saaro Shariif Xasan iyo Madoobe Nuunow oo mar kale la qabto ..
Shax cusub oo ladoonayo in Hal sano gumeysi lagu geliyo dalka Soomaaliya. (HOOS KA AKHRI) →
Shirkii IGAAD oo soo dhamaday iyo qodobo ka soo baxay (Daawo soo dhoweynta Madaxweyne Shariif)
Madaxda Urur Goboleedka Igad ayaa shirkoodii 20-aad uga furmay Magaaladda Addis Ababa ee Xaruunta Wadanka Itoobiya, waxaana looga hadlay arrimo quseysa Wadamada Somaliya iyo Koonfurta Suudaan.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, Wakiilada ururada Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo Jaamacada Carabta.
Shirka Magaaladda Addis Ababa ayaa waxaa shir gudoominaayay Raa’isal Wasaaraha Xukuumadda Itoobiya Meles Zenawi, isagoo shirka ku daah furay in looga hadlaayo arrimaha Somaliya iyo Koonfurta Suudaan oo qura.
Shirka oo Jimcihii shalay Magaaladda Addis Ababa lagu soo afjaray, ayaa waxaa leesku raacay in la-kordhiyo Ciidamadda Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom, si markaasi looga adkaato Xoogaga Shabaab, oo loo-arko mid halis ku ah ammaanka Geeska Afrika.
Waxaa la-fillaayaa in dhawaan Magaaladda Muqdisho ay soo saaraan Ciidamadda kun gaaraaya oo ka socda dhinaca Wadanka Sierra Leone, kuwaa oo qeyb ka noqon doona Ciidamadda Midowga Afrika ee Amisom.
CalankaSomalia | January 28, 2012 at 5:32 pm
Madaxda Urur Goboleedka IGAD oo isku raacay in Tallaabo laga qaado cid walba oo ka hortimaadda Heshiiskii Kampala
Kulan madaxda urur goboleedka IGAD ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya ayaa waxay iskula garteen in tallaabo laga qaado cid walba oo ka hortimaadda heshiiskii Kampala, Roadmap-ka iyo weliba heshiiskii Garoowe lagu gaaray.
“Waxyaabihii looga hadlay kulanka madaxda IGAD waxaa ka mid ahaa sidii lagu hirgelin lahaa heshiiskii Kampala, Roadmap-ka iyo heshiiskii Garoowe, cid walba isku dayda inay ka hortimaadana tallaabadii ku habboon laga qaado,” ayuu yiri safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Siciid Yuusuf Nuur oo shirkaas ka qaybgalay.
“Qodobbada kale ee shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ah sidii iskaashi buuxa ay u yeelan lahaayeen ciidamada ku sugan Soomaaliya iyo kuwa dowladda KMG ah si looga adkaado Al-shabaab,” ayuu danjiruhu hadalkiisa ku daray.
Go’aanka IGAD ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay xil ka qaadi lagu sameeyay afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Dhanka kale, waxaa lagu wadaa in maalmaha berri uu ka furmo Addis Ababa shirka ururka Midowga Afrika, kaasoo lagu soo qaadi doono arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan ammaanka iyo abaaraha